Mba rahoviana ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Efa ho sivy volana volana izao no nipetrahan'ny fitondrana Rajaonarimampianina, raha fintinina dia mbola tsy miainga ny toekarena amin'ny ankapobeny raha tanisaina ireo tsy fahafaham-po miseho etsy sy eroa. Mbola miezaka hatrany anefa ny mpitondra manao izay handresen-dahatra ny mpiara miombon'antoka amin'i Madagasikara ny mba hisian'ny famatsiam-bola farany izay haingana azo hatao. Eo amin'ny sehatry ny famoronana asa ohatra dia tafaverina eo anivon'ny AGOA tokoa isika saingy manomboka amin'ny volana janoary vao manomboka mihatra izany fifanarahana izany. Eo amin'ny sehatry ny fandriampahalemana dia tsy mbola mivaha tanteraka ny olana any atsimo na dia eo aza ny “Opération coup d'arrêt” izay efa nandaniana vola maro hatreto. Eo amin'ny sehatra sosialy dia tsy mbola nahitana marimaritra iraisana ny raharaha FRAM na dia efa namoaka teny mazava aza ny fitondrana fa tsy mahasakana ny fidiran'ny mpianatra ny fitokonan'ireo avy ao amin'ny FRAM. Eo amin'ny sehatry ny toekarena amin'ny ankapobeny dia tsy mitsahatra mihen-danja ny Ariary ary miha mitotongana ny fahefa-mividy amin'ny ankapobeny.
Io sehatra farany io no andeha asian-teny kely amin'ity indray mitoraka ity satria efa niteraka ady hevitra lehibe teto amin'ny firenena ny hoe Dépréciation (fihenan-danja) sa Dévaluation (Fampihenan-danja) ny vola malagasy no mitranga. Amin'ny ankapobeny dia miankina amin'ny ilay antsoina hoe MID na Marché Inter-bancaire de Devise na Tsenam-bola vahiny eo anivon'ny Banky foibe ny sandan'ny Ariary satria raha be ohatra ny entana izay ahondrantsika any ivelany dia mitombo ny vola vahiny miditra eto ka mampihena ny vidin'ny vola vahiny izany ary mampiakatra kosa ny Ariary raha ny lalanan'ny tolotra sy ny tinady, saingy amin'ny ankapobeny dia ny fanafarana (importation) entana avy any ivelany no tena misongadina ka voatery mitady vola vahiny ny mpandraharaha ary izany no mampihen-danja ny Ariary.
Vokatr'izany rehetra izany dia tsy mitsahatra ny mamono tena ny Ariary ary mitotongana ny fari-piainan'ny malagasy, ny mampalahelo aza dia sahy nilaza mihitsy ny mpitondra fa hanao dévaluation teo aloha teo mba handrisihina ny malagasy hanondrana entana satria rehefa atotongana mantsy ny vola dia ahazoana tombony amin'ny lafiny vola ariary miditra ho an'ny mpanondrana nefa raha ny zava-misy dia tsy ny tantsaha malagasy velively no hahavita hanondrana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fa mbola ny vahiny ihany satria ny 60%n-ny orinasa lehibe dia an'ny vahiny avokoa. Arye fa nilaza mazava koa ireo mpandraharaha malagasy nandritra ny SIM fa lazain’ny an’ny ivelany fa ty manaraka fenitra iraisam-pirenena ny entana vokarin’ny malagasy dia tsy raisiny.
Sadaikatra noho izany ny rehetra satria ny famatsiam-bola izay antenaina hampiditra vola vahiny tsy tonga, ny vola malagasy tsy ahavitana mifaninana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, nisy aza sosokevitra nataon'ny mpahay toe-karena ny amin'ny anafoanana ny MID mba hampisondrotana ny fahefa-mividy saingy hatreto dia mbola tsy mihaino izany ny mpitondra.
Raha ny antontan'isa farany, navoakan’ny Banky iraisam-pirenena, dia 92% ny malagasy no milomano ao anaty fahantrana na dia ambara matetika aza fa manan-karena i Madagasikara amin'ny lafiny maro. Mba rahoviana ary vao handray fanapahan-kevitra mazava ny mpitondra ka hampiakatra ny sandam-bola malagasy ahafahan'ny vahoaka mamorona asa rehefa tsy hamorona ny fanjakana ? Mba rahoviana vao azo ialana ny fanafarana solika avy any ivelany ka mampiankin-doha lava izao antsika amin'ny mpanjanaka, isika anefa efa tafiditra ao anatin'ny firenena mpamokatra solika ary efa voaporofo koa fa mahasolo ny solika ny éthanol koa maninona raha vidin'ny fanjakana ny toaka gasin'ny tantsaha raha tia hamorona asa marina ny fanjakana ? Mba rahoviana no ho tanteraka ireny fampanantenana nandritra ny fampielezan-kevitra ireny ? Mba rahoviana ny malagasy vao mba afaka hioty ny harena maro eto amin'ny tany fa toa mandeha ho azy ny volamena, sokatra, andramena, vatosoa, sns. nefa tsy mbola naheno isika fa naverina any amin'ny kitapom-bolam-panjakana izay tratra fa toa manjavona avokoa ? Iza re no mba hanolo-tena ka hanadino ny tombontsoa manokana fa mba hijery ny ho an'ny daholobe amin'ny fanatanterahana ny asa izay hataony mandritra ny fitondrany e ?
Mbola ho variana ve ny vahoaka amin'ny manaraka ka ho sodokan'ny vola mandalo vetivety, spectacle, tee-shirt,eElo, kasikety dia ho amidy indray ny vato (safidy) rehetra ka rehefa avy eo manetsetra ?
Mila olona tompon'andraikitra ny firenentsika fa tsy voatery hiandry ny vahiny hanala antsika amin'ny Fahantrana mahazo antsika satria tsy mbola misy ny olana mivaha, ny trano sachet ny vilany kapoaka, toa very maina daholo ny tolom-bahoaka... ary tsy mahavoky antsika ny AGOA.